Isitolo esidayisa yonke impahla Vertical Glass Model with Dual Suction 740 Manufacturer and Supplier | I-ARCAIR
I-Vertical Glass Model ene-Dual Suction 740
Izinhlobo zemibala yengilazi yepaneli optioanl Special DC yemoto enamandla amakhulu okuncela nomsindo ophansi 3 isivinini sokubonisa ngokulawula kokuthinta nge-1 digital display.
Izindlela ezimbili zokungenisa umoya ngokuzikhethela: ukwenza kabusha ngaphakathi ngezihlungi zamalahle noma ukuhambisa phezulu ngepayipi lokukhipha.
Ukukhanya kwe-LED kuqhubeka kusebenza ngaphezu kwamahora angama-30,000.
Isihlungi sokugcoba i-aluminium ephephile.
Idizayini ekhethekile enomumo oqondile
Izinhlobo zephaneli ezifana nengilazi, i-ceramic, ukhuni lokuzikhethela ukufanisa isitayela esihlukile sekhishi esidinga imoto engu-90W DC ngamandla amakhulu okuncela 650m3 / h ngejubane elingu-3, ​​kulula ukususa uwoyela nephunga, ukuhlanza umoya omusha nokugcina umndeni uphilile. I-suctiion emabili – ezansi nangaphambili zombili ezinomoya ongcono wokumpompa ileveli ephansi yomsindo - njengengxoxo ethulile phakathi komndeni. Isilawuli sokuthinta ngokubonisa oku-1 kwedijithali, okulula ukusebenza ukuhlangabezana nezidingo zokupheka ezahlukahlukene Ukujula nge-233.5MM kuphela, ukufanisa kangcono ikhabethe futhi kubukeka sengathi kuphezulu ekhishini. I-chimney eguquguqukayo engu-400 + 400mm, ihlangana kahle nokuphakama kwekhishi okuhlukile okusetshenzisiwe ngezihlungi ze-aluminium grease ezifakiwe zifakwa kalula futhi zithathe indawo ye-Operating Mode
Ngokukhetha okuguquguqukayo phakathi kokuphindaphinda noma ukukhipha umoya oqondile.
Imodi yokuphinda ujikeleze isihlungi samalahle.
2. Imodi eqondile ekhathaza umoya: Isetshenziswa njenge-hood ducting cooker hood enepayipi lamanzi elingu-150mm ububanzi. I-cooker hood yethu kanye nepayipi le-duct ku-1.5M noma i-2M, nawe ungayithenga njengezingxenye zokungcebeleka kalula ezitolo ezidinga kuphela ububanzi obufanele.
Izibani ezimbili ze-1.5W ze-LED ezibekwe ngqo ngaphansi kokupheka kwebanga futhi zibona kangcono lapho zipheka futhi zingakhanya njengokumnyama. I-LED kulula ukuyishintsha futhi ingaqhubeka isebenza ngaphezu kwamahora angama-30,000
Langaphambilini I-60cm Angled Wall Mounted Cooker Hood 725
Olandelayo: I-Island Cooker Hood eklanyelwe 820
UDunstabzugshaube Mit Fettfilter
I-Dunstabzugshauben Aus Glas
Insimbi Engagqwali Cooker Hood
I-Wand Montierte Dunstabzugshaube
Okubalulekile: Umzimba opendwe mhlophe, iphaneli lokuqedela ngobumba
Ukuhamba komoya: 650 m³ / h
Uhlobo Lwezimoto: I-1x90W-DC motor
Uhlobo Lokulawula: Isilawuli sokuthinta
Ukukhanyisa: 2 × 1.5W isibani se-LED
Uhlobo lokuhlunga: 2pcs Aluminium filter
Ukunwetshwa kukashimula: 400 + 400mm
Ilayisha i-QTY (20/40 / 40HQ): 96/216/270 (60cm)
Umbala: Umzimba opendiwe omnyama / Mhlophe
Enza ngendlela oyifisayo iphaneli yokuqedela ye-ceramic
Shintsha: Isilawuli sokuthinta se-LCD, Isilawuli kude
Hlunga umsebenzi: Isihlungi samalahle / isihlungi se-VC
I-High End Yakhelwe i-Angled Hood 708C
I-90cm High End Touch Control Angled Hood 706
I-High End Yakhelwe i-RGB Angled Hood 728
I-60cm Angled Cooker Hood LED Lights 736C
I-60cm Angled Wall Mounted Cooker Hood 725
Ingilazi ephelele ye-Angled Hood 723